Warbixin iyo ka hortag booqasho caafimaad
Haddii aad tahay shaqaale, waa in laguula socdaa caafimaad marka aad ku jirto mid ka mid ah xaaladaha soo socda:
heshiis shaqo oo furan, heshiis shaqo oo wakhti go'an ah, heshiis shaqo ku meel gaar ah (ku meel gaadh ah), qandaraas shaqo.
Waajibkani waxa kale oo uu khuseeyaa shaqaale ka mid ah loo shaqeeyaha gaarka ah.
Booqashooyinka caafimaadka ee qasabka ah waxaa ka mid ah booqashada macluumaadka iyo ka hortagga.
Waa maxay booqashada macluumaadka iyo ka hortagga?
Dhammaan shaqaalaha cusub ee la qorayo waa in ay ka faa'iidaystaan ​​booqasho macluumaad iyo ka hortag ah 3 bilood gudahooda marka ay guda galaan waajibaadkooda, tusaale ahaan marka ay dhab ahaantii bilaabeen shaqada.
Shaqaalaha qaarkood, booqashadan waa in la fuliyaa ka hor inta aan lagu qorin goobta shaqada. Ayaa ka walaacsan:
shaqaalaha habeenka, dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano, dadka la kulmay kooxda 2 wakiilada noolaha, taas oo keeni karta jirro aadanaha iyo halis u ah shaqaalaha, dadka soo gaadhin beeraha electromagnetic oo ay saameeyeen jagooyinka kuwaas oo qiyamka ay dhaafeen xadka gaadhista dejiyay qodobka R. 4453-3 ee xeerka shaqada.Waa maxay ujeedada booqashada macluumaadka iyo ka hortagga?
Warbixin iyo ka hortag booqasho caafimaad 17-Abriil, 2022Tranquillus
READ Noqoshada Kaaliyaha HR: sida Ornela ay nafteeda ugu yaboohday mustaqbal xirfadeed cusub
horeBooqashada soo kabashada ka hor iyo booqashada soo kabashada
socdaBooqashooyinka iyo baaritaanada caafimaadka ee macnaha guud ee shaqada
Qandaraaska Ka-qaybgalka Dhallinyarada: daabacaadda wareegtada gudaha Joornaalka Rasmiga ah
Bilaash: Hordhaca SEMrush, Qalabka Suuq geynta iyo Hufnaanta